I-MIUI 10: Ulwahlulo olutsha lweXiaomi | I-Androidsis
Umsitho uququzelelwa nguXiaomi namhlanje ugcwele iindaba. Ukongeza kwisiphelo sayo esitsha, iXiaomi Mi 8, uphawu lusishiya nezinye iindaba ezininzi. Enye yazo yinkcazo esemthethweni ye-MIUI 10. Inguqulelo entsha yomaleko ngokwezifiso zeefowuni ngoku zisemthethweni. I-brand ikhethe uyilo oluhlaziyiweyo kunye nezinto ezintsha kunye nemisebenzi emitsha kuyo.
Inkqubela phambili enkulu kwisizukulwana esidlulileyo. Ke sinokulindela utshintsho olukhulu, zombini ubuhle kunye nokusebenza ngokufika kwe-MIUI 10. Zeziphi iindaba ezenziwa ngumaleko ngokwezifiso?
Izinto ezibonakalayo lolona tshintsho lucacileyo kwaye eyokuqala ukuba iqatshelwe. Ngale ndlela, inkampani ikhethe ukuvuselela uluhlu lwayo olupheleleyo, nge Uyilo lwanamhlanje, uyilo oluncinci kunye nokukhululeka ngakumbi ukusebenzisa abasebenzisi. Ngapha koko, i-MIUI 10 iyafana ne-Android P. Ukusuka kwinto onokubona kuyo ukuba nefuthe elicacileyo loyilo lweZinto.
1 I-MIUI 10: Uyilo olutsha kwisitayile esinyulu se-Android P
2 Ingqondo yolwazi
3 Iapps ezintsha zomthonyama
4 Ukudibanisa ne-automation yasekhaya
I-MIUI 10: Uyilo olutsha kwisitayile esinyulu se-Android P
Olu tshintsho lunokubonwa ngeendlela ezininzi. Njengokuba, iimenyu zibekiwe ngendlela entsha, ebhetyebhetye ngakumbi kwaye inomdla kubasebenzisi. Ukongeza, sinepaneli yokuseta ekhawulezayo, ekhethe ukuhanjiswa ngokufanayo naleyo ikwi-Android P.
Nditsho nemibala eye yaziswa yi-MIUI 10 iyafana nale siyibonileyo kuhlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza. Ngokugqama okukhethekileyo kumhlophe neblue. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuba inkampani Ukhethe uyilo olucocekileyo nolulula. Yonke into ifikeleleka ngakumbi kubasebenzisi, kulula ukuyisebenzisa.
Enye into enomdla kolu hlobo lutsha lomaleko wokwenziwa kukuba ulwazi luboniswe kwiimenyu. Into ebonakala ngathi yenziwe kunye nenyani yokuba UXiaomi wazisa inotshi kwezinye zeefowuni zakhe, NjengoXiaomi Mi 8. Ke olu hlengahlengiso lutsha kufuneka lwenziwe ewe okanye ewe. Kwaye sele beyazisa.
Kwiinyanga ezidlulileyo sibonile ukuba ubukrelekrele bokuzenzela bufumaneka njani kwiifowuni zeXiaomi. Ke ngoko, ayimangalisi into yokuba ikwafumene ubukho kulungelelwaniso lomntu. Kuba iifowuni ezine-MIUI 10 ziya kuba nesoftware ethile kulawulo lwazo. Ukuze amava omsebenzisi angcono afumaneke ngabathengi.
Ukongeza, izixhobo zentsimbi ezinobukrelekrele bokufakelwa kwaye zinolu hlobo lokwahlulahlula ngokwezifiso kuya kufuneka zibonelele ngenkxaso yokusebenzisa obu buchwephesha. Lo nto sinokubabona abancedisi abakrelekrele kwiifowuni. Ukongeza kwimisebenzi eyongezelelweyo exhaswa bubukrelekrele bokufakelwa.
Ukongeza, ukusetyenziswa okukhethekileyo kobukrelekrele bokufakelwa kwiifowuni ezinolu hlobo lwe-MIUI sele kutyhilwe. Njengoko Imowudi yemizobo iza kusebenza kuyo nayiphi na ifowuni eyisebenzisayo. Le software iya kuvumela iifoto ukuba zithathwe ngokungathi ifowuni ineekhamera ezimbini.
Esi sigqibo sithatha ukuba lo msebenzi uza kufumana iifowuni ngobuninzi Kwintengiso. Kuba besesikhe sayibona ngaphambili kwiimodeli ezithile. Kodwa ngoku iya kuba ngabo bonke abasebenzisi abafumana uhlaziyo abaya kuxhamla. Utshintsho oluya kuxatyiswa ngokuqinisekileyo.
Iapps ezintsha zomthonyama
I-Bloatware yenye yeengxaki ezinkulu abasebenzisi abajongana nazo kwezi zahlulo zokwenza ngokwezifiso. Kwimeko ye-MIUI 10 sinokulindela usetyenziso olutsha lwendalo, aezinye iinguqu ezibalulekileyo ezazisele zikho. Uyilo lwezi zicelo luya kuguqulwa kwaye luya kuhambelana ngakumbi noyilo olutsha lolungelelwaniso ngokwezifiso.
Ke ngoko, kubonakala ngathi kuya kubakho i-bloatware ekhoyo kulungelelwaniso ngokwezifiso. Nangona kungaziwa kakuhle kangakanani. Ke kubonakala ngathi azizubakho iinguqulelo ezininzi kule nkampani.
Ukudibanisa ne-automation yasekhaya
Ukuzenzekelayo ekhaya kuyakhula kwaye kunokubakho okwandayo kwintengiso. UXiaomi ufuna ukuthatha ithuba loku kwaye asishiye notshintsho olubalulekileyo kulungelelwaniso lwalo ngokokumalunga noku. Njengoko Sifumana ukudityaniswa okukhulu neMi Home kwi-MIUI 10. Ukuze abasebenzisi babe nakho ukulawula izixhobo zabo zasekhaya ngokulula kwifowuni yabo.
Ukongeza, olu nxibelelwano luhlaziyiwe, ngendlela ekhululekile ngakumbi ukuze ube nakho ukulawula ezi zinto kunye nezixhobo kwifowuni yakho.
Ukuza kuthi ga ngoku Ayityhilwanga ukuba le nguqulo intsha yomaleko wokwenziwa kwayo izakufika nini kwiifowuni zeXiaomi. Eyona nto inokwenzeka iya kuba sehlotyeni, njengoko kwenzekayo kunyaka ophelileyo kunye nohlobo lwangaphambili. Kodwa kule ngqiqo silindele ukuqinisekiswa kwinkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » I-MIUI 10: Ulwahlulo olutsha lweXiaomi lulapha